I-rainbow moonstone meaning - Ukuvuselelwa okusha okusha kwe-2021 - ividiyo
Izimpawu zencingo yethingo lwenkosazana kanye nezindawo zokuphulukisa. Intengo yetshe lenyanga eluhlaza okwesibhakabhaka.
Thenga itshe lothingo lwenyanga lwemvelo esitolo sethu
I-rainbow moonstone vs inyanga yenyanga
Izimpawu zencingo yethingo lwenkosazana kanye nezindawo zokuphulukisa
Yini eyenzelwe uthingo lwenyanga yothingo?
Ngabe ulinakekela kanjani itshe lothingo lwenyanga?
Ugqoka muphi umunwe indandatho yetshe lothingo?
Ungabona kanjani ukuthi itshe lenyanga uthingo lingokoqobo?
Ingabe itshe lothingo lwenyanga lemvelo?
Linzima kangakanani itshe lenyanga?
Iyini intengo yetshe lenyanga eluhlaza okwesibhakabhaka?
I-Moonstone yi-orthoclase feldspar. Inokwakheka kwamakhemikhali kwe-KAlSi3O8 (potassium, aluminium, silicon, Oksijini). I-Moonstone itholakala ngemibala ehlukahlukene kubandakanya omhlophe, ukhilimu, grey, isiliva, ipentshisi, mnyama. Ngenkathi zikhombisa i-adularescence, akuyona i-flash emibalabala njengoba ungayithola nge-painbow moonstone.
I-rainbow moonstone iyi-plagioclase feldspar. Inokwakheka kwamakhemikhali kwe- (Na, Ca) Al1-2Si3-2O8 (sodium, calcium, aluminium, silicon, oxygen). Lokhu ukwakheka okufanayo kwamakhemikhali kwe-labradorite. Ngaphandle kwegama lenyanga, empeleni limhlophe nge-labradorite. Yingakho leli tshe linezimo ze-labradorescence esizithola ku-labradorite. Imvamisa iqukethe ukufakwa okumnyama kwe-tourmaline.
Njengamanye amatshe ayigugu e-feldspar ama-amazonite ne-labradorite, iyazwela kumakhemikhali, ama-abrasives, ukushisa, ama-acids kanye ne-ammonia. Ungalokothi usebenzise i-steamer, amanzi ashisayo noma ama-ultrasonic cleaners ngaleli litshe eliyigugu. Sebenzisa insipho emnene namanzi asempompini okushisa ekamelweni ngendwangu ethambile ukugcina ubukhazikhazi betshe eliyigugu.
Amadepho atholakala eCanada, e-Australia, eNdiya, eMadagascar, eMexico, eMyanmar, eRussia, eSri Lanka nase-USA.
Itshe eliyigugu kucatshangwa ukuthi liletha ukulinganisela, ukuvumelana nethemba ngenkathi kuthuthukiswa ubuhlakani, ububele, ukukhuthazela nokuzethemba kwangaphakathi. Kukholakala ukuthi kusiza ekuqiniseni ukuqonda nokuqonda kwengqondo, ikakhulukazi ukusinikeza imibono yezinto ezingabonakali ngokushesha. Ngoba kusisiza ukuthi sigweme umbono wetonela, siyakwazi ukubona amanye amathuba. Kufana nokubaneka kogqozi okuza lapho sivulekile futhi sithule. Lapho sigqoka leli tshe, ukukhuthazeka okuguqula impilo kungenzeka kaningi futhi kaningi.
Itshe kucatshangwa ukuthi liletha ukulinganisela, ukuvumelana nethemba ngenkathi kuthuthukisa ubuhlakani, ububele, ukukhuthazela nokuzethemba kwangaphakathi. Kukholakala ukuthi kusiza ekuqiniseni ukuqonda nokuqonda kwengqondo, ikakhulukazi ukusinikeza imibono yezinto ezingabonakali ngokushesha.
Njengamatshe amaningi ayigugu, amatshe wenyanga abuthakathaka futhi kufanele aphathwe ngokunakekela. Ukuhlanza, mane usebenzise amanzi afudumele ngensipho emincane ukuhlanza. Ungasebenzisa ibhulashi elithambile uma kunesidingo. Ngemuva kwalokho, mane umile ngendwangu ethambile
Ukuthola izinzuzo eziningi kuleli tshe, ukuligqoka endandeni yesiliva enhle kakhulu kuyindlela engcono kakhulu. Ngisho nokufundwa kwezinkanyezi kuncoma ukuthi itshe lenyanga ligqokwa kakhulu emunweni omncane wesandla sokudla.
Itshe lingabonakala nge-adularescence yalo, ebonakala njengomthombo wangaphakathi wokukhanya noma we-sheen. Ingahlukaniswa ne-orthoclase moonstone ngenkomba yayo ephakeme yokubuyisa namandla adonsela phansi aphezulu.
Yebo iyi-labradorite engenambala, imaminerali ehlobene kakhulu ye-feldspar ne-sheen ezinemibala ehlukahlukene ye-iridescent. Yize empeleni kungelona itshe lenyanga, kuyafana ngokwanele ukuthi ukuhweba kulamukele njengegugu uqobo lwalo.
Inobulukhuni obungu-6 kuye ku-6.5, obungabonakala buthambile uma uqhathanisa namatshe ayigugu, kepha kunzima ngokwanele ukugqokwa.
Izinto eziguquguqukayo, ezimhlophe noma ezinombala ojabulisayo womzimba kanye ne-adularescence, zivame kakhulu emakethe futhi zilawula amanani aphansi.
Itshe lothingo lwenyanga lwemvelo liyathengiswa esitolo sethu
Senza ubucwebe betshe lenyanga lwenkosazana njengamasongo wokuzibandakanya, imigexo, amacici e-stud, namasongo, imihlobiso elengayo… Ngiyacela Xhumana nathi kwesilinganiso.